नेपालमै यस्तो– पाल्पामा सुरु भयो 'चिच्याएर वर माग्ने' मेला ! - Koshi Online
नेपालमै यस्तो– पाल्पामा सुरु भयो ‘चिच्याएर वर माग्ने’ मेला !
पाल्पा, कात्तिक १७
तिनाउ गाउँपालिका–४, सत्यवतीमा चिच्याएर बर माग्ने धार्मिक मेला शुरु भएको छ । रातको समय चिच्याएर बर माग्दा पूरा हुने विश्वासका साथ अहिले मन्दिर क्षेत्रमा बर माग्नेको चहलपहल बढेको छ । सत्यवतीताल संरक्षण तथा मन्दिर विकास समितिको आयोजनामा शुरु भएको सत्यवती धार्मिक मेलामा रातीको समयमा चिच्याएर बर माग्नेको अहिले भीड लागेको छ ।